Thursday March 24, 2022 - 23:08:35 in by Super Admin
Waxaad ku guulaysateen hagaajinta bilicda magaalada iyo kor u qaadida nadaafadda, taasoo uu culayskii ugu weynaa lagu suuliyey Olollihii khamiista u dambeysa bil kasta.
Sidaasi darteed, mudane waxaan kugula talinayaa in aad ku dhawaaqdo maalinta dhismaha waddooyinka oo bille ah. Tusaale ahaan in bil kasta Isniinta u dambeysa loo asteeyo maalinta Dhismaha, banaynta iyo nadiifinta waddooyinka.
Maalintaasi, waxay noqon doontaa maalin reer Hargeysa ay saacado kooban u dareerraan olollaha hawl-wadaagga dhismaha iyo hagaajinta Jidadka Magaalada ee halbowlaha, xaafadaha iyo Suuqyada.
Olollahaasi waa inuu noqdaa mid ay ku tartamaan degmooyinka, Xaafadaha,qaybaha bulshada iyo Ganacsatada magaaladu, islamarkana laysku qiimeeyo, layskuna abaal-mariyo.
Arrintani waxay faa'ido weyn u tahay horumarinta Jidadka, kobcinta Waddaniyadda, wax-wada qabsiga, wada-shaqaynta Dawladda hoose iyo shacbiga iyo sidoo kale kalsoonida Umadda.
Hawshani waxa kale oo ay sahlaysaa siday inala tahay in xaafad kastaa dariiqyada dhex mara iyadu ay ka shaqayso oo ay samaysato.
Waxa Qoray Suxufi Saleeban Kalshaale.